China Leap milina haingam-pandeha avo lenta lehibe mpanamboatra sy mpamatsy | dingana
Masinina mitsambikina haingam-pandeha lehibe
Masinina mitsambikina haingam-pandeha haingam-pandeha dia mandray 50 × 100 mm boribory boribory boribory miforona, miaraka amina rafitra miorina sy milamina. Ny masinina manontolo dia voahodina amin'ny alàlan'ny milina fanodinana gantry lehibe hahazoana antoka ny fisaka sy ny fitovizany; Ny ety ivelany dia mandray fitsaboana plastika mandroso hery avo lenta, miaraka amin'ny bika aman'endrika sy tsara tarehy.
Rehefa mandeha amin'ny hafainganam-pandeha haingana ny fitaovana dia milamina sy milamina ary tsy simba ny tahan'ny takelaka. Masinina mitsambikina haingam-pandeha haingam-pandeha lehibe dia misy ampahany roa, ny iray dia ny mekanisma fiovana, ny iray kosa mampita ny fomba. Ny mekanisma fanodinam-bola dia mandray ny fitambaran'ny fampitana maotera servo, reducer planetary, lalamby mpitari-dalana sy rakotra ary pinion miaraka amina toerana misy azy, fametrahana haingana ary tabataba ambany. Ny rafitra fampitana dia mandray ny fitambaran-tsarimihetsika vita amin'ny rubber, baseband sheet, haingam-pandeha haingam-pandeha ary maotera miovaova-miorim-paka mba hahazoana antoka ny fandehan'ny taratasy marina sy miorina ary hafainganam-pandeha. Ireo takelaka izay mamakivaky dia azo avadika na averina elanelam-potoana. Masinina mitsambikina haingam-pandeha haingam-pandeha lehibe dia azo ampiharina amin'ny fotoana famokarana takelaka isan-karazany, toy ny vavahady varavarana, tontonana ao an-tokantrano, gorodona, sns. ny fitaovana, ary mandray ny rafitra fanaraha-maso manan-tsaina PLC, interface-friendly man-machine interface tsara. Ny milina fanodinam-bidy haingam-pandeha haingam-pandeha dia afaka mampihena ny asa amin'ny fizotry ny fampiasana, misoroka ny fahasimban'ny lovia amin'ny fizotran'ny asa, ary mampihena ny hamafin'ny asa. Ny milina fanodinam-bidy haingam-pandeha haingam-pandeha lehibe dia fitaovana fampidinana sy famoahana entana amin'ny fizotry ny famokarana mandeha ho azy ireo mpanamboatra fanaka vita amin'ny gorodona sy tontonana.
Programmable lojika lozisialy (PLC) dia rafitra elektronika fandidiana nomerika natao manokana ho an'ny fampiharana indostrialy. Mampiasa fahatsiarovana azo alamina izy io, ao amin'ny fitehirizany anatiny hanatanterahana fiasa lojika, fanaraha-maso milahatra, fotoana, fanisana ary aritmetika ary torolàlana momba ny asa hafa, amin'ny alàlan'ny fidirana nomerika na analog sy output hifehezana ireo karazana fitaovana mekanika na fizotry ny famokarana.
Hafainganana Pcs 16pcs / fihodinana / min
Haben'ny gorodona Halava 600 ～ 1850 mm （）
150 s, ～ 250mm ny sakany
Teo aloha: Masinina mitsambikina tsy misy fifandraisana lovia 3D rafitra fanesorana vovoka electrostatic
Manaraka: Masinina mitsambikina-ZHDB andian-tsarimihetsika haingam-pandeha mandeha ho azy
Ny milina fametahana pallet milina